PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - U-Obama usexoshe abasebenzi bezindlu zenxusa laseRussia
U-Obama usexoshe abasebenzi bezindlu zenxusa laseRussia
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-01 - EZAMAZWE -
UMENGAMELI Barack Obama uyalele abasebenzi bezindlu zenxusa laseRussia abangu 35 ukuba baphume baphele e-USA ngenxa yezinsolo zokuthi bayizinhloli ezaba nesandla emkhankasweni wokhetho luka-2016 obelungenyanga eyedlule.
Lesi sinyathelo esithathwe ngu-Obama ezinsukwini zakhe zokugcina esikhundleni ziphenya ikhasi elisha embangweni ophakathi kwala mazwe osekuneminyaka eyizitha, yize kwaziwa ukuthi seyaphela iCold War eyayiphakathi kwawo.
Lokhu kuzofakela uMengameli ongenayo uMnuz Donald Trump ingcindezi yokuthi uzobhekana kanjani neRussia eholwa nguMnuz Vladimir Putin.
UTrump usekuveze kaningi ukuthi uyamhlonipha uPutin kanti noPutin ngokunjalo ubonakala esese ukuthi sekuzophatha uTrump.
U-Obama, wayevele ethembisile ukuthi kukhona abazothathelwa izinyathelo ngokungenelela kwezinhloli zaseRussia emikhankasweni yokhetho okunenkolelo yokuthi kwaba nesandla ekutheni imiphumela ivune uTrump owayenyanywa ngabaningi ngesikhathi semikhankaso.
Izikhulu eziningi bezilokhu zikhombe ngenjumbane uPutin ukuthi nguye owaba nesandla ekulimazeni imikhankaso kaNkk Hillary Clinton, bafakela no-Obama ingcindezi yokuthi akathathe izinyathelo.
“Lesi sinyathelo silandela izexwayiso eziningi esesizenzile kuhulumeni waseRussia, futhi ziyadingeka kanti yiyona ndlela yokubhekana nale mizamo yokulimaza i-US nezindlela zamaxhama okuxhumana,” kusho u-Obama eseholidini eHawaii esitatimendeni asikhiphile.
Uthe wonke umuntu waseMelika kumele ethuke ngalezi zenzo zeRussia.
Akucaci ukuthi uTrump owaziwayo ukuthi uyazifela ngoPutin uzoziguqula yini lezi zinyathelo zika-Obama uma esethatha izintambo ngoJanuwari 20.
UTrump uyakuchitha okushiwo yiCIA ukuthi iRussia yiyo eyaba nesandla ehlazweni lokucakafula busululu izizindalwazi zosopilitiki baseMelika ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Uthe uzohlangana nezinhloli kungekudala. IRussia nayo ibhoka ngolaka ikhala ngokuthi lesi sinyathelo seMelika asikho emthethweni, yathembisa ukuthi nayo izoziphindiselela ngendlela efanele.
IRussia iyaphika ukuthi inesandla kuleli hlazo lokucakafulwa kwezizindalwazi zikahulumeni waseMelika.
I-CIA imile ekutheni iRussia yiyo eyagqekeza izizindalwazi zeDemocratic Party ngaphambi kokhetho lukaNovemba 8, ngenhloso yokuthi kuwine uTrump, owagcina ehluke uNkk Clinton.
Amalungu esishayamthetho e-US athi angamalungu eRepublican namaDemocrats athi azophikisana nezinyathelo zikaTrump zokuguqula lesi sinqumo.-REUTERS